Izindaba - Ungakhetha kanjani amandla okugcina amandla
Ukunikezwa kwamandla okugcinwa kwamandla kwangaphandle sekuphenduke umkhiqizo odingekayo uma siya ngaphandle kwekhempu, ukusakaza bukhoma kwangaphandle, ipikiniki, njll. Ngakho, asikho isidingo sokukhathazeka ngokusetshenziswa kwamandla uma singaphandle!Kodwa, esimweni samanje sekhwalithi engalingani yemikhiqizo ye-elekthronikhi, ungakhetha kanjani ukunikezwa kwamandla okugcinwa kwamandla ngaphandle kokubili kokuqinisekiswa kwekhwalithi kanye nenani elihle kakhulu?
Kufanele siqale siqonde ukubukeka nokokusebenza kwamandla okugcina amandla angaphandle, ukusetshenziswa kweseli, nokuthi isekela ziphi izimiso zokuphepha, njll.
Igobolondo lethu lombala wokugcinwa kwamandla okugcina amandla lithatha i-PC flame retardant material, elimelana nezinga lokushisa eliphezulu futhi lingagwema ngempumelelo ukuvuza kukagesi nokushaqeka kukagesi;Ngokwamandla kagesi, umgogodla kagesi webanga lemoto oqinisekisiwe uyamukelwa, kanti umgogodla womthamo omkhulu kagesi uphephile futhi uhlala isikhathi eside!
Iphinde isebenzise umklamo omusha kazwelonke womnyango wokuphepha osezingeni.Zonke izindawo zethu zokuhlangana zinemisebenzi eminingi yokuvikela ukuphepha, okungukuthi, i-anti overcurrent, i-anti overvoltage, i-anti overload, i-anti short circuit, i-overcharge, i-over excharge kanye nokuvikelwa kwezinga lokushisa elingaphezulu.
Sinesibani sokukhanyisa esesimisiwe.Lo mklamo ungasetshenziswa ekukhanyeni okuphuthumayo.Cindezela isikhathi eside inkinobho yokukhanyisa, izophinde ishintshele kumodi yelambu lesignali yokuhlenga yesimo esiphuthumayo ye-SOS, okusho ukuthi ngisho noma sihlangabezana nengozi lapho sihambela ngaphandle, singayisebenzisa ukuze sicele usizo!
I-interface yethu ihlanganisa isokhethi elinezimbotshana, isixhumi esibonakalayo sohlobo C, isixhumi esibonakalayo se-USB-A esishaja ngokushesha, isixhumi esibonakalayo esivamile se-USB-A, isixhumi esibonakalayo sokushaja okokufaka kwe-DC, njll;Ukwengeza, iphaneli yesixhumi esibonakalayo nayo ifakwe isibonisi se-LCD, ukushintsha kwamandla, ukushintshwa kwamandla e-AC, ukushintsha kokukhanyisa, njll. Ngokombono walezi zisekelo zodwa, kwanele ukuhlangabezana nezidingo zansuku zonke zabantu abaningi.
Ngokusebenza okusebenzayo, umthamo webhethri we-148100mah wanele ukuthi sishaje imishini evamile njenge-UAV, umakhalekhukhwini kanye nencwajana yokubhalela!Ngokuqondene nokusekelwa kwamandla kwemikhiqizo, kuya ngezidingo zakho zokusebenzisa.Sine-300W, 500W, 700W, 1000W, 1500W, 2000W kanye ne-3000W esingakhetha kuyo.
Ngaphezu kokusebenzisa amandla amapayipi avamile ukuyishaja, singakhetha futhi ukushaja kwamaphaneli elanga nokushaja imoto, okuphathekayo nokusheshayo.
Uma uthanda, sicela usithinte!
I-Led Strip Light Power Supply, Ukunikezwa kwamandla okuguquguqukayo, I-Dc Power Supply, I-Led Strip Light Transformer, Ukunikezwa kwamandla okuhlelekayo, Ukunikezwa kwamandla okwenziwe ngezifiso,